Dhacdo.com - News: Oday Nasaruddin iyo dahabkii ka dhumay
16,289,586 unique visits
Oday Nasaruddin iyo dahabkii ka dhumay
Oday Nasaruddin ayaa waxaa maalin ka dhumay shilin dahab ah. Markaas ayuu bilaabay inuu raadsho. Wuxuu ka raadiyay meel iftiin ah oo ay yiileen faynuusyo. Deedna nin saaxiibkii ah ayaa waydiiyay waxa uu raadinayo.
Oday Nasaruddin ayaa u sheegay inuu raadinayo shilin dahab ah oo ka dhumay. "Ma halkan ayuu kaaga dhumay" ayuu waydiiyay ninkii. "Maya" ayuu ku jawaabay oday Nasaruddin isagoo intaa raaciyay in uu uga dhumay meel mugdi ah. Markii ninkii waydiiyay waxa keenay inuu ka raadiyo meel uusan uga dhumin dahabkiisa ayuu oday Nasaruddin ku jawaabay: "Meesha uu iiga dhumay waa mugdi, waxba lagama arki karo sida darteed waxaan ka raadinayaa meeshan oo iftiin ah."
Shiil on May 13 2010 13:30:16 ·
0 Comments · 1195 Reads